, article, Rooftop Bar, Warmae Review
ဆိုင်တော်တော်များများလည်း ပြန်ဖွင့်နေကြပါပြီ။ အရင်လို မဟုတ်ရင်တောင်မှအရင်နီးပါး အားလုံးက ပုံမှန်နီးပါး ပြန်လည်ပတ်နေကြပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ဘော်ဒါတွေနဲ့စုပြီး သွားလို့ကောင်းမယ့် ရန်ကုန်ကဘားအချို့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမဟုတ်လဲ လကုန်တဲ့အခါသွားလို့ရအောင်ပေါ့။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းပေါ်က The Glass Yangon ပါ။ Rooftop ဖြစ်ပြီးလေညှင်းခံချင်တဲ့သူတွေအတွက်၊ ဓာတ်ပုံလှလှရိုက်ပြီး ကြွယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်မိုက်တဲ့နေရာလေးပါ။ ဆိုင်မှာ Chilling လုပ်ချင်တဲ့သူတွေစုပြီး အေးဆေးထိုင်လို့ရမယ့်နေရာလေးပေါ့။
No. 18B, Kyaik Waing Pagoda Road, Mayangon Township
09 670 909060
Live Music ကြည့်ရှုရင်း ဆုံကြမယ့်သူတွေအတွက်နေရာလေးတစ်ခုပါ။ အစားအသောက်အရသာကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားကြတာတွေ့ရပြီး လမ်းကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ try ကြည့်သင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။
No(50), 8Block, Waizayandar Road,South Okkalapa
09 890 076005
ဒီနေရာကတော့ လူငယ်တွေအတွက် လုံးဝမျက်စိကျစရာနေရာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့် လူအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ပြီးဝင်ခွင့်ပြုထားလို့reserve လုပ်မှအဆင်ပြေပါမယ်။
No.66, Wai Za Yan Tar Road, Yangon.Myanmar
Table reservation – 09980823801‬
ဒီနေရာက Yankin Heights Rooftop Restaurant ပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့တော်တော်လေး Fine တဲ့ Rooftop နေရာလေးလို့မြင်မိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးသွားတာတင်မကပဲ ချစ်သူအတွက်၊ မိသားစုအတွက်ပါ private dinner ကျင်းပဖို့ service တွေပါ ရနိုင်တဲ့နေရာလေးပါ။
Floor R, 29 Aung Zeya Road, Yankin Township
09 44544 4429
Phone : 09 44544 4429
Close-up of colorful goat stew in cooking pan on top of wooden table.
ဆိတ်သားကိုခွင်ပေါ်တွင် ဆီသတ်သည့်အခါတွင် သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကိုအရည်ညှစ်ထည့်ပြီးချက်ပေးလျှင် ညှီနံ့ပျောက်၍ အရသာကောင်းစေပါသည်။
ငါးအရိုးစူး၍ လည်ချောင်းထဲတစ်နေပါက ကြက်ဥအစိမ်းကိုဖောက်သောက်၍ မျိုချပေးလျှင် အရိုးစူးခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။
နို့တစ်စက်ကို မင်နှိပ်စက္ကူပေါ်တွင်အစက်ချကြည့်ပါ။ နို့စစ်မှန်လျှင် ပျံ့မသွားပဲစက္ကူပေါ်တင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ရေရောထားပါက စက္ကူထဲပြန့်ဝင်သွားပါမည်။
ထမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးများကို အရည်ညှစ်ပြီးသား သံပုရာခွံဖြင့် တိုက်ချွတ်ပေးပါကအိုးများတွင် အနံ့အသက်ဆိုးများကင်းစင်စေပါသည်။
ဆိတ်သား၊ ဘဲသား၊ အမဲသား၊ ဝက်သားစသည့် အသားများ နူးမြန်စေရန် ရှာလကာရည်အနည်းငယ်ထည့်ကာ
နှယ်ပြီးချက်လျှင် သို့မဟုတ် ချင်းရည်ဖြင့် နှယ်၍ ချက်လျှင် ပိုမိုကာအနူးမြန်စေပါသည်။
သံပုရာသီးကို မီးနွေးနွေးဖြင့်ကင်ပြီးညှစ်လျှင် သံပုရာရည်ပိုရပါသည်။
အခုခေတ် အရသာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြုတ်ကို လူတိုင်းစားဖူးကြမှာပါ။ အချိန်ကုန်သက်သာပြီးစားရတာအဆင်ပြေလို့လူအတော်များများ မကြာခဏ စားဖြစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းတာကိုတော့ လူတိုင်းသတိပြုမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မကောင်းမှန်းသိတာကို ဇွတ်မိတ်စားနေမယ့်အတူတူ ဘယ်လိုစားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်ပြီးထိခိုက်မှုသက်သာစေမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Hand picked instant noodles for put in boiling water pot
ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်မှာပါဝင်တဲ့ အရသာမှုန့်ထုပ်လေးတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုများတဲ့ဆားတွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲတော့ အကုန်ထည့်တာမဟုတ်ပဲ တခြားအိမ်မှာရှိတဲ့ ဆားပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့်တစ်ခုခုကိုရောသုံးပါ။ နောက်ထပ်သတိပြုရမှာတစ်ခုက ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို မကျက်တကျက်အနေအထားမှာဘယ်တော့မှ မစားပါနဲ့။ လိုအပ်တဲ့ ရေနွေးဆူဆူပမာဏနဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်လေးတွေ နူးအိပြီး တစ်မျှင်ခြင်းကွဲသွားတဲ့ထိပြုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီထက်ပိုစိတ်ချချင်ရင်တော့ ပြုတ်ရည်ကို သွန်ပြီး အရည်စစ်လိုက်ပါ။ ဟင်းရည်အတွက် နောက်ထပ်ရေနွေးပူပူနဲ့ထပ်ပြုတ်တာမျိုးက စိတ်ချရပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကို အထုပ်ထဲကပါတဲ့အရာတွေအပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထပ်ထည့်ပြုတ်ပြီးလည်း စားနိုင်ပါတယ်။ မှို၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ပင်စိမ်း၊ တရုတ်နံနံ၊ ငရုတ်သီး စသည်ဖြင့် လိုအပ်တဲ့ပမာဏလောက်ကို ထည့်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီထပ်ပိုအာဟာရဖြစ်ချင်ရင်တော့ကြက်ဥဖောက်ထည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်ဥပြုတ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပုစွန်ထည့်ပြုတ်တာဖြစ်ဖြစ် အဆီပိုင်းမပါတဲ့ အသားအနည်းငယ်ထည့်ပြုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
အစားတစ်လုပ်အတွက် အချိန်အရမ်းမပေးနိုင်တော့တဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေကလည်း အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာရှိနေပါပြီ။ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်မှန်းသိပေမယ့် မဖြစ်မနေစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ အထက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းလုပ်စားကြည့်သင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် ကျန်းမာရေးက အရေးအကြီးဆုံးအရာဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ရင်တော့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစားအစာတွေကို ဘယ်တော့မှ ဖြစ်သလိုမစားပါနဲ့။
ကိုရီးယားရိုးရာ ယမကာ Makgeolli
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရှေးအကျဆုံးယမကာတစ်ခုလို့ တင်စားကြတဲ့ Makgeolli အကြောင်းကို ဗဟုသုတရစေဖို့ပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်။ အရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိပြီး ရှေးခေတ် ကိုရီးယားလူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာယမကာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက Makgeolli ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေးအကျိုးများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရှေးခေတ်နှောင်းပိုင်းထဲက လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Makgeolli ဟာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်အထိ လူသိများလူကြိုက်များခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဆန်အခက်အခဲကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာမှ Makgeolli ဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည်ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ Makgeolli ကိုထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန်ကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားပြီး အယ်ကိုဟောလ် ပမာဏ 6–8% သာပါဝင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်ပြီး ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအများစုသောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ Makgeolli မှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီးအမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်တာကြောင့် အူလမ်းကြောင်းအတွက် အကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကင်ဆာနဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကို ပြန်ခုခံနိုင်မယ့် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးလည်း Makgeolli မှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရှတတအရသာရှိတဲ့ Makgeolli ကို ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကတော့ ပန်းကန်လုံး၊ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး သောက်လေ့ရှိကြတယ်။ အချို့က သရက်သီး နာနတ်သီးတို့နဲ့ရောပြီး Cocktail လုပ်သောက်ကြတယ်။ ဒေသအသီးသီးက လူမျိုးအသီးသီးရဲ့ ရိုးရာအစားအသောက်တွေအကြောင်းကို လေ့လာပြီး မြည်းစမ်းရတာဟာ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Makgeolli ကို ဒီမှာလည်း ဝယ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပြီး မသောက်ဖူးရင်တော့ try ကြည့်သင့်တဲ့ ကိုရီးယားယမကာတစ်ခုလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
Ways to eat atabuffet
ဒီတစ်ခါ ဘူဖေးကို တန်အောင်ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရေးပါမယ်။ အဝစားဆိုင်သွားပြီး အလှစားလို့ကတော့ ဘယ်တန်ပါ့မလဲ။ ဒီတော့ များများကြိတ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
Assortment of fresh dishes displayed in hotel buffet. Variety of food in canteen ready for dinner. Vegetable salads. All inclusive
အဝစားဘူဖေးဆိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သက်တောင့်သက်သာရှိမယ့်အဝတ်အစားကိုရွေးဝတ်သင့်ပါတယ်။ ကျပ်နေတဲ့အဝတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ စားရတာကသိကအောင့်ဖြစ်ပြီးအဝစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဘောင်းဘီချောင်တာဝတ်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် တန်အောင်တော့စားရမှာပါပဲ။ အဲတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အီစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုခဏမေ့ထားပြီး ဈေးနည်းနည်းများမယ့် ပင်လယ်စာလိုမျိုးဟာကို အရင်ဆုံးရွေးစားပါ။ ဈေးများပြီးအိမ်မှာသိပ်မစားဖြစ်တဲ့ အသားမျိုးကိုဦးစားပေးစားပါ။ ဒါပေမယ့်ရုပ်ပေါက်လောက်အောင်တော့ သရုပ်ပျက်တဲ့ထိတော့ မစားသင့်ပါဘူးနော်။
အခြေခံအားဖြင့် အချဉ်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါတဲ့အချိုရည်တွေက အအီပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ဘူဖေးကို အီစေမယ့်အစားအစာမျိုးနဲ့ တွဲစားရင်တော့ သိပ်စားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နိုင်သလောက် Soup တစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေ တွဲစားတာမျိုး ဘူဖေးကိုပိုစားစေနိုင်ပါတယ်။
ဘူဖေးမစားခင်မှာ ဗိုက်အရမ်းဆာနေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဗိုက်ဆာလို့ဘူဖေးကိုများများစားနိုင်မယ်ထင်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်။ ဆာတဲ့စိတ်နဲ့ အမြန်စားတာက သိပ်မစားနိုင်ပါဘူး။ ပန်းသီးဖြစ်ဖြစ် ဒိန်ချဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်မယ့် အစားအစာမျိုးကို ကြိုစားထားတာက ဗိုက်သိပ်မဆာတော့ပဲ အေးဆေးစားနိုင်ပါတယ်။
မလောပါနဲ့။ ဖြည်းဖြည်းစားပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အားကြီးနဲ့စွတ်စားတာမျိုးက သိပ်မစားနိုင်ပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အစာကိုကျေညှက်အောင်စားမှ တန်အောင်စားနိုင်မှာပါ။
ဘူဖေးစားနေတုန်းမှာ ဆိုဒါပါတဲ့အရည်သောက်တာက ဗိုက်ကိုပြည့်စေပါတယ်။ အရည်သောက်ချင်ရင် ရေနည်းနည်းသောက်ပါ၊ Juice တစ်ခုခုသောက်ပါ။ ဆိုဒါပါတဲ့အရည်ကိုဘူဖေးစားပြီးတဲ့အခါမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဘူဖေးမစားခင်လမ်းနည်းနည်းလောက်လျှောက်ပေးတာကလည်း ပိုစားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းပါ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့တော့ ပိုစားနိုင်တာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာ။ အစားတွေကိုကိုယ့်စားပွဲခုံပေါ်ကိုအများကြီးယူပြီး မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်တော့ တတ်နိုင်သမျှမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ဘူဖေးဖြစ်ဖြစ် အလှူပေးပဲဆိုဆိုကိုယ်နိုင်သလောက်ကိုသာစားခြင်းက ပိုစမတ်ကျစေပါတယ်။
အသီးမှာသရက် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သရက်သီးကိုတော့ လူကြိုက်များတာအမှန်ပါပဲ။ သရက်သီးကို အစိမ်းစားလို့ကောင်းသလို အမှည့်စားလို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သရက်သီး ဖျော်ရည်မှာပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာစေတဲ့ဓာတ်တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
သရက်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်မှာ သံဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ သရက်သီးဖျော်ရည်ကို နေ့တိုင်းသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် သံဓာတ်အားပြည့်စေပါတယ်။ သရက်သီးမှာ အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ ဗီတာမင်အေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအကြည့်များလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိပြသနာတော်တော်များများကိုလည်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရည်ကိုလည်းလှပစေတဲ့ ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ဟာ သရက်သီးမှာ ပါဝင်တာကြောင့်ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပါတယ်။ သွေးတွင်းက အကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာက သရက်သီးကို ဈေးတန်တန်နဲ့ အလွယ်တကူဝယ်စားနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်တဲ့ သရက်သီးကို ဖျော်ရည်လုပ်ပြီး သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို အစားအသောက်နဲ့ဖန်တီးလိုက်ပါ။
Healthy kitchen tips.
ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ အစားအစာစားဖို့လိုတယ်ဆိုပေမယ့် အစားအစာကြောင့်ပဲကျန်းမာရေးမကောင်းတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အစားအစာကြောင့်လည်းကောင်း၊ ချက်ပြုမှုပုံစံကြောင့်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုစီမံသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးပါမယ်။
အသီးအရွက်၊ အသားငါးတွေကို အစိမ်းမစားပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ အစိမ်းစားခြင်းက ဘတ်တီးရီးယားတွေကို စားလိုက်သလိုမျိုး အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းစားမယ်ဆိုရင်တောင်
ဘယ်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချရမလဲဆိုတာကို အရင်ဆန်းစစ်ပြီးမှ စားသင့်ပါတယ်။ အသားငါးမှတင်မဟုတ်ပဲအသီးအရွက်အချို့ကလည်း ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေကြောင့် အစိမ်းမစားသင့်ပါဘူး။အစားအစာကို လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ ကျက်အောင်ချက်သင့်ပါတယ်။
အစားအစာတွေကို ရေစင်အောင်ဆေးကြောပါ။ မချက်ပြုတ်ခင်မှာ ရေနဲ့ စနစ်တကျစင်ကျယ်အောင်ဆေးရပါမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အသားငါး၊ အသီးအရွက်အတွက် စဉ်းနှီးတုံးကိုတောင် တစ်ခုစီခွဲထားသင့်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတိုင်း ပြန်လည်သန့်စင်ဖို့လိုပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာကို အနည်းဆုံးတစ်ပတ် တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အသားငါးတွေကို အချိန်အကြာကြီး ထည့်စားတာမျိုးကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ စားလက်စအစားအစာတွေကိုလည်း အများဆုံး လေးရက်ထက် ပိုမထားသင့်ပါဘူး။
နောက်ဆုံး အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ချက်ပြုတ်မယ့်သူပြုလုပ်ရမယ့် သန့်ရှင်းရေးပါ။ လက်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ပိုးမွှားတွေ ကပ်နေနိုင်ပါတယ်။ အစားမစားခင်မှာ လက်ကိုစင်ကျယ်အောင်ဆေးပေးရသလို အစားအသောက်တွေကို မပြင်ဆင် မချက်ပြုတ်ခင်မှာလည်း လက်ကိုဆေးသင့်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာရယ်ရေနွေးနွေးလေးရယ်သုံးပြီး စင်ကျယ်အောင် ဆေးတာက စိတ်ချရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက စားသုံးသူရော အစားအသောက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်သူတွေပါ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။ တချို့သော ကျန်းမာရေး ပြသနာတွေက အိမ်မနောက်ဖေး မီးဖိုချောင်က လာတတ်တယ်ဆိုတာကို သတိထားနိုင်အောင်အိမ်ရှင်မတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်။
RESTAURANT OPEN DURING THE CORONAVIRUS
COVID-19 ကာလအတွင်း စားသုံးသူများနဲ့ မျက်ခြေမပြတ်အောင် စားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်အချို့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာကြပြီးအရင်လို ဆိုင်ထိုင်စားဆိုတဲ့ ပုံစံကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကတော့ ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ပဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ အခုကာလက စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့ အရင်အခြေနေတွေနဲ့မတူပဲ စိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလုပ်ငန်းရှင်တိုင်း သဘောပေါက်နားလည်ကြမှာပါ။ ဒီတော့ စားသောက်ဆိုင်အတွက် ဘယ်လိုအရာတွေပြုလုပ်သင့်လဲ၊ဘာတွေက ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ အဓိကကျလာမလဲဆိုတာကို ပါဝင်ဆွေးနွေးကြရအောင်။
အစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ
ဒီအချက်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို အတိအကျလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီး ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကိုလာရောက်တဲ့သူတိုင်းကို အပူချိန်တိုင်းတာမျိုး၊ အဝင်မှာလက်ဆေးခိုင်းတာမျိုးစတဲ့ အခြေခံကျတဲ့အချက်အချို့ကို မလွဲမသွေလိုက်နာနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စားသုံးသူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုလည်း မဖြစ်မနေထည့်တွက်ရပါမယ်။ ဒီအချိန်ကပူပူနွေးနွေးဖြစ်စကာလလိုမဟုတ်တော့ပေမယ့် ရောဂါက အနီးနားမှာရှိနေဆဲဆိုတာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က မပြည့်စုံပဲနဲ့ စွန့်စားပြီးအရဲစွန့်လုပ်တာမျိုးက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Guideline အတိုင်းဆောင်ရွက်ထားရန်လိုသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၀န်ကြီးဌာန၏ Official Website တွင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
COVID-19 ကာလအတွင်းမှာ Food Delivery ကတစ်ဆင့်မှာယူကြတာအလွန်များပြားလာပါပြီ။ အခုပြောင်းသွားတဲ့ အရွေ့တစ်ခုမှာ ကိုယ့်စားသောက်ဆိုင်ပါ၀င်သွားဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်မှာရတဲ့ Menu တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ အွန်လိုင်းမှာလူသိများစေတာမျိုးက ပိုရောင်းကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ သာမာန်အရည်အသွေးမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ အရသာကောင်းနေပါစေဦးတော့ မစားရသေးတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်က ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုင်ကို လူသိများတဲ့ delivery တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကလည်း ဆိုင်အတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ပါ။
စားသုံးသူတွေအတွက် Promotion ဆိုတာ အမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အခုအချိန်မှာ အမြတ်များများရဖို့ရည်ရွယ်တာထက် များများရောင်းဖို့ကို ဦးတည်ပြီး ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့ potential customers တွေကို စုဆောင်းရမယ့်ကာလတစ်ခုပါ။ စားသုံးသူတွေအတွက်ရော ဆိုင်အတွက်ပါ အဆင်ပြေမယ့် Campaign တစ်ခုခုကို စလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။
Social Media ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့
ခုခေတ်က စားသောက်ဆိုင်တိုင်းမှာ website မရှိရင်တောင်မှ Facebook page တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးရှိကြပါတယ်။ ဆိုင်ကအရသာရှိတဲ့ ဟင်းပွဲတွေအကြောင်းကိုပုံမှန်လေးရေးပေးဖိူ့လိုပါတယ်။ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်အချိန်ထက်အခက်အခဲအချို့ရှိလို့ အဆင်မပြေမှုများရှိရင် နားလည်ပေးကြဖို့ကို ဆိုင်ရဲ့ page မှာရေးထားသင့်သလို ဆိုင်မှာလည်း ထင်သာမြင်သာအောင် ရေးပြထားရပါမယ်။ ဒီအချက်တွေက စားသုံးသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေပါလိမ့်မယ်။
Most Popular Japanese Foods
, article, Japanse
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဂျပန်အစားအစာတွေအကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဂျပန်အစားအစာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အများစုက ဆူရှီကိုပဲ တန်းမြင်ကြပါတယ်။ ဆူရှီအပြင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အရသာရှိတဲ့ ဂျပန်အစားအသောက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလည်း အခုလိုဂျပန်အစားအသောက်တွေစားလို့ရနေပါပြီ။ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါ ဘာတွေမှာစားရမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Udon, Japanese Noodle.
ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ အူဒွန်က ဂျပန်လူမျိုးအများစုနှစ်သက်ကြပြီး ဂျုံခေါက်ဆွဲ(နန်းကြီး)လိုခေါက်ဆွဲမျိုးပါ။ ခေါက်ဆွဲအသားကြီးလို့ တစ်လုတ်စားတိုင်းအရသာရှိတယ်။ အသားပြုတ်ရည်နဲ့တွဲစားရပြီး ကြက်သွန်မြိတ်ပါးပါးအုပ်ပြီးစားရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသအသီးသီးပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စားသုံးကြတယ်။ အပူအဖြစ်စားနိုင်ပြီးတချို့က အအေးပုံစံနဲ့လည်းစားလေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာလိုဆို မုန့်လင်မယားပုံစံခွက်လေးတွေမှာ ကြော်ရတာက တာကိုယာကီပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Street Food တွေထဲလူကြိုက်များပြီး အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တစ်မျိုးပါ။ ရေဘဝဲသားကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီးအဆာထည့်ကြော်ထားလို့စားရတာအရမ်းအရသာရှိပြီး ဒီနိုင်ငံကဆိုင်အချို့မှာလည်း ဝယ်စားနိုင်ပါတယ်။
ပြုတ်ရည်ပူပူထဲကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာအသီးအရွက်၊ အသားထည့်စားရတာကတော့ နာဘဲပါ။ ဂျပန်လူမျိုးအများစုကတော့မိသားစုတွေစုံတဲ့အခါ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ နာဘဲကိုစားလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဆာရှီမီက ပင်လယ်စာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ရတဲ့ အသားလွှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တူနာ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါးတွေကိုသုံးလေ့ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံက Foodie တွေလည်းကြိုက်ကြတဲ့အစားအစာပါ။ ဂျပန်မှာတော့ ပင်လယ်စာအပြင် အခုနောက်ပိုင်း ဆာရှီမီကို မြင်းအသားနဲ့ပါ လုပ်လာကြပါတယ်။
အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ရောကြော်တဲ့ ဂျပန် ပန်ကိတ်ကိုတော့ Okonomiyaki လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ ဝက်သား၊ ဂျုံမှုန့်စတဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောပြီး အနံ့၊ အရသာနဲ့ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့
ဒါကတော့ အချိုပွဲပါ။ ရေခဲခြစ်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရသာထပ်ပေါင်းပြီး အချိုတည်းရတာပါ။ အချို့ကအသီး၊ မိုချီ၊ ရေခဲမုန့်တို့ကိုစားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး တကယ်လည်းအရသာရှိ စားကောင်းတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အချိုပွဲတစ်ခုပါ။